ဇငျဇငျ – Hlataw.com
ကမြတို့ အိမျထောငျသကျ နှဈ(၂၀)လောကျမှာပဲ ကမြရဲ့အမြိုးသားဟာ အကျ ဆီးဒငျ့တဈခုကွောငျ့ ဆုံးပါးသှားခဲ့ရပါတယျ။ကမြဟာ ကလေးနှဈယောကျအမေ၊ အသကျ(၃၇)နှဈအရှယျနဲ့ မုဆိုးမဘဝကို ရောကျရှိခဲ့ရပါတော့တယျ။ကမြယောကျြားက ကမြကို အတျောလေးခဈြပါတယျ။သူဆုံးပါးသှားတဲ့အခြိနျထိ ကမြကို စောငျ့ ရှောကျခဲ့တုနျးပါပဲ။သူအကျဆီးဒငျ့ဖွဈပွီး ဆုံးသှားခဲ့ရတဲ့အတှကျ လြျောကွေးရတဲ့ငှနေဲ့ ကမြဟာ စကျဆနျးဘကျမှာ ကိုယျပိုငျ အိမျလေးတဈလုံးကို ဝယျယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။အခုဆို ကမြရဲ့သားအကွီး မငျးမငျးတောငျ အသကျ(၁၈)နှဈကြျော လူပြိုပေါကျအရှယျ ရောကျနခေဲ့ပါပွီ။ပိုလြှံတဲ့ ငှေ လေးနဲ့ ကမြတို့ မိသားစုသုံးယောကျဟာ လညျပတျစားသောကျနိုငျတဲ့ အခွအေနေ ရှိပါတယျ။သမီးအငယျလေးကလညျး ခုဆို ဒုတိယတနျးတကျနတေဲ့အရှယျတောငျ ရောကျလို့နပွေီဖွဈပါတယျ။
ကမြဟာ လငျသားဆုံးပါးသှားတဲ့ အခြိနျကစလို့ ကမြရဲ့စိတျတှကေို သားနဲ့ သမီးအပျေါမှာပဲ ပုံထားခဲ့ပါတယျ။လငျဖွဈသူမရှိတော့တဲ့ တဈနှဈကြျောကာလအတှငျး ကာမအရ သာ၊ အထိအတှတှေ့နေဲ့ ကငျးကှာနခေဲ့ရပါတယျ။ထိုကာလအတှငျး၌ ကာမစိတျဆန်ဒမြား မကွာခဏဖွဈပျေါတောငျ့တမိသ လိုရှိခဲ့သျောလညျးသားလူပြိုပေါကျနဲ့ သမီးမကျြနှာတို့ကို ထောကျထားပွီး အသဈရှာတာမြိုး၊ ကှယျရာမှာ ခိုးစားတာမြိုးတောငျ မလုပျခဲ့ပါဘူးရှငျ။မိနျးမသားတဈယောကျပဲရှငျ…။အသကျကလညျး (၃၈)နှဈတောငျ မပွညျ့သေးတဲ့အရှယျဆိုတော့ ကမြ သှေးသား တှကေ ထကွှသောငျးကနျြးတုနျးပေါ့။လငျနဲ့ နှဈနှဈဆယျလောကျပေါငျးခဲ့တဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့အနားမှာ ယောကျြားသား မရှိတော့ တခါတရံ ခံစားထိတှခေဲ့ဖူးတဲ့အရာကို တောငျ့တမိတာပေါ့ရှငျ။ဒါပမေယျ့ ကမြရဲ့ကာမဆန်ဒတှကေို ခြုပျတီးနခေဲ့ပါ တယျ။တခြို့မိနျးမတှေ ပွောပွောနတေဲ့ ကိုယျ့စောကျဖုတျကို ကိုယျ့ဘာသာပှတျပွီး အာသီသဖွတေဲ့ အပွုအမူမြိုးကိုတောငျ ကမြ မလုပျခဲ့ပါဘူး တကယျပါ။ဒါပမေယျ့ ကမြတို့မိသားစု စကျဆနျးဘကျကို ပွောငျးပွီး အခွခေနြထေိုငျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာပဲကမြရဲ့စိတျ၊ ကမြရဲ့ဘဝအခွအေနတှေဟော ကမြသားအကွီးကောငျ မငျးမငျးကွောငျ့ ပွောငျးလဲခဲ့ရပါတော့တယျရှငျ။
ကမြသား မငျးမငျးက ဒီရပျကှကျထဲပွောငျးလာပွီးတဲ့နောကျ လူပေါငျးစုံနဲ့ အပေါငျးအသငျးလုပျတယျ။ပေါငျးသငျးတဲ့လူတှေ ကလညျး သူ့ထကျကွီးတဲ့လူတှေ မြားပါတယျ။အဲ့ဒီထဲမှာမှ စိုးသီဟဆိုတဲ့ကောငျလေးကို ကမြသားက အတျောလေး ခငျမငျ ရှာပါတယျ။စိုးသီဟက ကမြသားထကျ (၅)နှဈလောကျကွီးတယျ။ရပျကှကျထဲမှာ အခှတှေရေောငျးတဲ့အလုပျလုပျတဲ့ ကောငျ လေးပါ။သားက အဲဒီကောငျလေးကို အိမျကို ချေါချေါလာတတျတယျ။အိမျမှာ စားကွ သောကျကွနဲ့ အမွဲလို ဝငျထှကျသှား လာနခေဲ့ပါတယျ။
ဖခငျရဲ့ထိနျးသိမျးမှုမဲ့သှားတဲ့သားက ကမြရဲ့ပွောစကားကို သိပျပွီးအလေးမထားတော့ပါဘူးရှငျ။
နောကျပွီး အိမျရဲ့စီးပှားရေးတဈစိတျတဈပိုငျးကို သားက တာဝနျယူထားပွနျတော့
ကမြဟာ သားကို ဖိဖိစီးစီးပွောဆိုမရနိုငျတော့တဲ့ အခွအေနတှေကွေောငျ့
သားဖွဈသူ အိမျမှာ သောကျစားနတောကိုတောငျ ခှငျ့ပွုပေးထားရပါတော့တယျ။
စိုးသီဟ ကို အိမျပျေါ ချေါလာပွီး အိမျမှာပဲ စားကွသောကျကွ
လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ လူငယျသဘာဝနကွေတာကို ကမြ ကွညျဖွူစှာပဲ လှတျထား လိုကျမိပါတယျ။
စိုးသီဟက ကမြကို “ အဈမ…အဈမ…” နဲ့ ရိုရိုသသေပွေောဆိုဆကျဆံပွနျတော့
စိုးသီဟကို ယုံကွညျပွီး သားကိုတောငျ ပွောဆိုထိနျးသိမျးပေးဖို့ အပျခဲ့မိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တခါတရံ စိုးသီဟရဲ့ အကွညျ့တှကေို ကမြ မကွိုကျလှပါ ဘူးရှငျ။
သားလဈတဲ့အခြိနျတှမှောဆို ကမြကို စူးစူးရဲရဲကွညျ့တတျပါတယျ။
ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှောတော့ ကမြကို ပုံမှနျပွောဆို ဆကျဆံတာဆိုတော့ ကမြလညျး မသိကြိုးကြှံပွုထားမိပါတယျ။
နာမညျနဲ့လိုကျအောငျ ထှားထှားအိအိနဲ့ ခပျခြောခြောမိနျးမတဈ ယောကျပါ။
ကမြရဲ့ခန်ဓာကိုယျက ဗိုကျကလေးနညျးနညျးပူတာကလှဲလို့ ရငျ အစုံက မို့မောကျတငျးရငျးနဆေဲပါပဲ။
ခါးကလညျး အဆီမရှိသိမျကဉျြးပွီး တငျသားတှကေလညျး ကားစှငျ့တငျးရငျးနတေုနျးပါပဲ ရှငျ။
ကမြကို ကမျးလှမျးခဉျြးကပျတဲ့ ယောကျြားတှေ ရှိနတေုနျးပါပဲ။
ကမြသားလူပြိုပေါကျနဲ့ သမီးငယျတို့ကို ထောကျထားပွီး အသဈမရှာခဲ့တာပါ။
ယောကျြားနဲ့ တဈနှဈကြျောကငျးကှာနတေော့ ကမြရဲ့အသှေးအသားတှေ၊
ခန်ဓာကိုယျ ပျေါက အဖုအထဈ၊ အမို့အမောကျ၊ အကားအစှငျ့တှကေ ပိုပွီးစိုပွတေဈရဈနတောပေါ့ရှငျ။
ကမြရဲ့နုပြိုမှုတှကေို စိုးသီဟဆိုတဲ့ ကောငျလေးက မကျြစိကနြပေုံရပါတယျ။
ယောကျြားတိုငျးလိုလို တပျမကျကွတဲ့ ကမြခန်ဓာကိုယျကို အဲဒီကောငျလေးလညျး တပျမကျမိမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ ကမြက စိုးသီဟရဲ့ အကွညျ့တှကေို မသိခငျြယောငျဆောငျပွီး အလိုကျအထိုကျဆကျဆံနခေဲ့ပါ တယျ။
ဖွဈခငျြတော့ စိုးသီဟက အဲဒီလောကျနဲ့ မတငျးတိမျနိုငျဘူးရှငျ့။
သားမ ရှိလညျး အိမျကို ဝငျထှကျလာတတျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ကမြသားအပွငျသှားတဲ့အခြိနျတှနေဲ့ ကမြသမီးငယျကြောငျးသှား နတေဲ့အခြိနျတှဆေို အိမျကို ရောကျရောကျလာပါတယျ။
အိမျမှာတဈယောကျထဲရှိနတေဲ့ ကမြကို စကားပွောရငျး ရယျကာ မောကာနှငျ့ ခွတေို့လကျတို့တှေ လုပျလာပါတယျ။
အကွမျးဖကျတာမြိုး၊ အနိုငျကငျြ့စျောကားတာမြိုးမဟုတျတော့ ကမြဘကျ ကလညျး သူ့ကို ခါးခါးသီးသီးမတုနျ့ပွနျခဲ့မိပါဘူးရှငျ။
နောကျတဈခကျြက သားဖွဈသူ မငျးမငျးက စိုးသီဟကို ဆရာတငျပွီး ခငျ မငျနသေလို
ကမြသမီးငယျ နှငျးဝလှေငျလေးကလညျး စိုးသီဟကို ခငျမငျနတောတှကွေောငျ့လညျး
ကမြက သူ့အပွုအမူတှေ ကို အပွဈမမွငျမိဘဲ အလိုကျအထိုကျနနေမေိတာလညျး ပါတာပေါ့ရှငျ….။
စိုးသီဟက လူပုံခပျဖွောငျ့ဖွောငျ့၊ ဒေါငျကောငျးကောငျးနဲ့ မိနျးကလေးတှကေလြောကျတဲ့ ရုပျမြိုး။
ဒါပမေယျ့ နာမညျ ပကျြရှိနသေူတဈယောကျပါ။
ရပျကှကျထဲမှာအနကွောလာတော့ မိနျးမခငျြးအတငျးပွောကွတဲ့ စကားဝိုငျးကနေ စိုးသီဟ အ ကွောငျးကို ကမြ သိခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
အကွောငျးက…. “ ဟဲ့ စနျးရီ…နငျ မိဇငျအကွောငျးကွားပွီးပွီလား….” “ ဘာမြားတုနျး အဝငျးရဲ့….”
“ မိဇငျက အခု ဟိုကောငျလေး စိုးသီဟကို ကုနျးနတေယျဆိုပဲ….”
မိနျးမတှေ အလုပျမရှိအလုပျရှာပွီး ရပျကှကျထဲက အတငျးအဖငျြးမှနျသမြှ ဝိုငျးဖှဲ့ကာ စုပွောနတေဲ့ဆီ အမှတျတမဲ့ရောကျရှိသှားတဲ့ ကမြဟာ
စိုးသီဟဆိုတဲ့ နာမညျပါလာတာနဲ့ အသအေခြာနားထောငျ နမေိပါတယျ။
“ မိဇငျ ယောကျြား ထှနျးရှကေ ကိုယျတဈပိုငျးလဖွေတျနမှေတော့ ကောငျမက ဆာနပွေီပေါ့ဟဲ့….
ဟိုနကေ့ ပုဇှနျ တောငျဘကျက တညျးခိုခနျးထဲ မိဇငျနဲ့ စိုးသီဟတို့ အတူတူတှဲဝငျသှားတာ တှလေို့ကျတယျတဲ့….”။
“ဟုတျရဲ့လား အဝငျးရယျ….” “ အျော…ငါက မဟုတျတဲ့ သတငျးကို ဘယျတုနျးက ပွောခဲ့ဖူးလို့လဲ….”
“ အဲဒီ စိုးသီဟ ဆိုတဲ့ ကောငျလေးက မမွငျ့ရီနဲ့လညျး ဖွဈသေးတယျမဟုတျလား အဝငျးရဲ့….”
“ အေးလေ….မမွငျ့ရီက အခုပဉျြးမနားမှာ တာဝနျကလြို့ ပွောငျးသှားပွီဆိုတော့
သူတို့အကွောငျးကိုသိထားတဲ့ မိဇငျ က စိုးသီဟကို ဆှဲစိလိုကျတာနမှောပေါ့အေ….”
“ စိုးသီဟက ရုပျကလေးသနားကမားနဲ့ သူနဲ့ရှယျတူကောငျမလေးတှကေို မတှဲဘူးနျော အဝငျး….
တဈခုလပျမတို့ လငျရှိမိနျးမတို့နဲ့ပဲ အလုပျဖွဈနတေယျ….အဟငျး….ဟငျး….” စိုးသီဟအကွောငျးတှကေ မကွားခငျြမှအဆုံးပါပဲရှငျ။
ဒါတောငျ စိုးသီဟကို လငျရှိနလေကျြနဲ့ ကွောငျတောငျနှိုကျခငျြ နတေဲ့မိနျးမတှကေ တဈပုံကွီးရှိနသေေးတယျဆိုပဲ။
စိုးသီဟရဲ့ ဇ ကိုသိလာရတော့ ကမြဟာ စိုးသီဟနဲ့ ပတျသကျဆကျဆံနရေတဲ့ အခွအေနတှေမှော စိတျထဲလှုပျခတျလာမိပါတယျ။
သူက မုဆိုးမ၊ တဈခုလပျ၊ လငျရှိ မိနျးမတှနေဲ့ အလုပျဖွဈနကေလြူဆိုတော့ ကမြကိုလညျး ဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ပေါ့ရှငျ….။
တဈနမှေ့ာတော့ ကမြရဲ့ဘဝတဈစိတျတဈပိုငျးကို ပွောငျးလဲသှားစမေယျ့ အခွအေနနေဲ့ ခွလှေမျးတဈခုကို စတငျ လြှောကျလှမျးခဲ့မိပါတယျ။
အဲဒီနကေ့ ကမြသား မငျးမငျးက အိမျမှာမရှိဘူး။
သမီးငယျ နှငျးဝလှေငျနဲ့ ကမြပဲ အိမျမှာရှိနတေဲ့ အခြိနျမှာ စိုးသီဟ တဈယောကျ အိမျကို ရောကျခလြာပါတယျ။
“ အဈမ…အိပျခနျးမီးမလငျးတော့လို့ဆို…မငျးမငျး ပွောလို့….သူ မလုပျတတျလို့ ကနြေျာ့ကို လုပျပေးပါဆိုတာနဲ့ ထှကျလာတာ….”
“ အျော….အေး…ဟုတျတယျ…မောငျလေးရဲ့….အဈမ လညျး မလုပျတတျဘူး….
တဈခကျြလောကျကွညျ့ပေးပါအုံး ကှယျ….မီးခြောငျးကြှမျးသှားတာလား မသိဘူး….”
စိုးသီဟက ကမြတို့ အိပျခနျးထဲဝငျသှားပါတယျ။
ကမြတို့ အိမျက ပေ(၂၀)(၆၀) မွကှေကျပျေါမှာ ပဉျြထောငျသှပျမိုး တဈထပျအိမျလေးပုံစံပါ။
အိမျထဲမှာ အိပျခနျးနှဈခနျး၊ စတိုခနျးလို အခနျးကဉျြးတဈခနျးနဲ့ ဧညျ့ခနျး၊ မီးဖိုခြောငျတို့ ဖှဲ့စညျးထားပါ တယျ။
မငျးမငျးက တဈယောကျထဲ တဈခနျးအိပျပွီး ကမြနဲ့ သမီးက တဈခနျးသပျသပျ အိပျပါတယျ။
မီးမလာတာက ကမြတို့ အိပျခနျးပါ။
“ အဈမရေ….တဈခကျြလောကျ လာကူပါအုံးဗြာ….” အိပျခနျးထဲမှ စိုးသီဟရဲ့ အသံကွောငျ့ ကမြရော သမီးပါ အိပျခနျးထဲ ဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
နှဈယောကျထဲဆိုရငျ မသငျ့ တျောဘူးလို့ ထငျတဲ့အတှကျ သမီးကိုပါ အဖျောအဖွဈ ချေါသှားခဲ့တာပါ။
“ ဒီမှာ ဆကျထားတဲ့ ဝါယာက ပကျြနတော အဈမ….ကတျကွေးလိုတယျ….နောကျပွီး မိနျးခလုတျလညျး ခပြေးထား ပါအုံး….”
“ သမီး နငျ့အကိုကွီးကို ကတျကွေးယူပေးလိုကျ….အမေ…မိနျးသှားခလြိုကျမယျ….”
“ အဈမက ဒီမှာနပွေီး ကနြေျာ့ကို ကူရမှာဗြ….နှငျးဝကေို မိနျးခခြိုငျးပွီး အဲဒီမှာ ခဏစောငျ့ခိုငျးလိုကျပါလား….
ဒီကရ ရငျ လှမျးပွောလိုကျမယျ….မီးလာ မလာစမျးရအောငျ….”
စိုးသီဟက ကမြသမီးကို အပွငျဘကျမိနျးရှိရာသို့ ပထုတျလိုကျမှနျး ကမြရိပျမိလိုကျပါတယျ။
ကတျကွေးယူပေးရငျး စိုးသီဟအနားမှာ ရပျနမေိပါတယျ။
အဲဒီမှာ စိုးသီဟက စတော့တာပါပဲ….။
“ အဈမ…ဒီကွိုးလေး ကိုငျပေးထား….” “ အငျး…ဟို…ဓာတျတော့ မလိုကျပါဘူးနျော….”
“ မလိုကျပါဘူး အဈမရဲ့….နှငျးဝကေို မိနျးခခြိုငျးထားတာပဲဟာ….နှငျးဝရေေ….မိနျးကို သခြောခထြားရဲ့လား….”
“ ဟုတျ…ခထြားတယျ အကိုကွီး….” စိုးသီဟက အပွငျဖကျမှ နှငျးဝကေို သခြောအောငျ အျောမေးလိုကျသေးတယျ။
ပွီးမှ ကမြကို ဝါယာကွိုးတဈခြောငျး ကို ကိုငျခိုငျးထားပါတယျ။
ဝါယာကွိုးက ကမြအရပျထကျ နညျးနညျးမွငျ့တဲ့နရောမှာ သှယျထားတာဆိုတော့
ကမြလကျကို အ စှမျးကုနျမွှောကျပွီး ဝါယာကွိုးကို ကိုငျထားရပါတယျ။
အဲဒီအခါမှာ ကမြရဲ့ရငျအစုံက လကျမွှောကျထားခွငျးကွောငျ့ မို့မောကျ ကွှတကျနပွေီး
မမှီမကမျးနဲ့ ခွဖြေားလေး ထောကျထားပွနျတော့ တငျသားအစုံကလညျး ကော့တကျကောကျခြိတျနတောပေါ့ ရှငျ။
အဲလိုအနအေထားဖွဈနတေဲ့ ကမြကို စိုးသီဟက တဈကိုယျလုံးသိမျးကွုံးကွညျ့ပွီး တံတှေးကို မြိုခနြတော ကမြမွငျနရေပါတယျ။
ပွီးလညျး ပွီးရော…. “ အို…” ကမြနှုတျက ခပျတိုးတိုးအသံလေး ထှကျသှားရပါတယျ။
သူက ကမြနောကျတညျ့တညျ့မှာ မတျတပျရပျပွီး ကမြဖငျဆုံ ကွီးကို တိုးဖိကပျလိုကျတာကွောငျ့ပါ။
ပုဆိုးဝတျထားတာတောငျ အတျောလေးရှကေို့ ငေါထှကျနတေဲ့ သူ့လီးတနျကွီးနဲ့ ကမြ ဖငျကို ဖိကပျလို့ထားပါတယျ။
ကမြရငျတှေ တဒိနျးဒိနျးခုနျသှားရသလို နားရှကျဖြားတှလေညျး ပူထူသှားရပါတယျ။
သူ့ပုဆိုး အောကျကဟာကွီးက မနညျးမနောလားရှငျ။
ဒီကွားထဲ မတျထောငျပွီး တငျးနသေေးပါတယျ။
အထိအတှအေ့ရ စိုးသီဟရဲ့ လီးတနျကွီးဟာ အတျောလေးကွီးပွီး ရှညျမယျဆိုတာ ကမြခနျ့မှနျးမိပါတယျ။
“ အဈမ…ကွိုးကို မလှတျလိုကျနဲ့နျော….ကနြျော ပွနျဆကျနပွေီ….”
စိုးသီဟက ကမြနောကျနားကနေ ပုခုံးကိုကြျောပွီး ကမြနားရှကျနားကပျကာ ပွောခွငျးဖွဈပါတယျ။
ရှကျစိတျ၊ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ကမြဟာ သူပွောတဲ့အတိုငျး ပုံစံမပကျြဘဲ ဝါယာကွိုးကို ကိုငျထားပေးနမေိတော့ သူ
က လညျး ကမြဖငျကို သူ့လီးနဲ့ စိတျကွိုကျကို ဖိထောကျထားလို့ ရနတောပေါ့ရှငျ….။
အခြိနျက နှဈမိနဈကြျောကြျောလေးပဲ ကွာ သှားတာပါ။
ကမြရဲ့ နားရှကျနားကိုကပျပွီး ကမြနားရှကျကို သူ့လြှာဖြားလေးနဲ့ မထိ တထိ လှမျးထိုးလိုကျရငျး….
“ အဈမ…ရပွီ…လှတျလိုကျတော့လေ….” လို့ ခပျတိုးတိုးလေးပွောပါတယျ။
ကမြတဈကိုယျလုံး ကွကျသီးဖုလေးတှေ ထသှားပွီး ရငျတှလေညျး အရမျးကို ခုနျနမေိပါတယျ။
စိုးသီဟက အပွငျက ကမြသမီးကို အျောပွောလိုကျသံကွားမှ ကမြစိတျကို မနညျးပွနျထိနျးလိုကျရပါတယျ။
ကမြဟာ အထိအတှကွေ့ောငျ့ ကွောငျရပျနမေိတာကိုးရှငျ့။
ကမြ စိုးသီဟရဲ့အကွံကို ခုမှသခြောနားလညျလိုကျရပါတယျ။
သူက ကမြ သမီးကို အပွငျမှာ ပထုတျထားပွီး ကမြကို အပိုငျကိုငျသှားတာကိုးရှငျ့။
“ အိုကေ….လငျးသှားပွီ….” မီးက ပွနျလငျးသှားပါပွီ။
ကမြမှာတော့ စောစောက ထိတှလေို့ကျရတဲ့ စိုးသီဟရဲ့ လီးတနျကွီးကွောငျ့
“ အဟငျ့….ဖွေးဖွေးလုပျနျော….သမီး နိုးသှားမယျ….” “ အငျးပါ…မမခြောရဲ့….”
“ ဟှနျး…လူကို ညာညာပွီး လာအနိုငျကငျြ့တယျ…အိုး…ဟငျ့…ဖွေးဖွေးသှငျးနျော….အငျး…ဟငျ့….”
အထကျပါစကားသံတှကေ ကမြအိခြောဝနေဲ့ စိုးသီဟတို့ ပွောနကွေတဲ့ စကားသံတှပေါ။
ဘယျနရောမှာလဲဆိုတော့ ကမြရဲ့အိမျ၊ ကမြသား မငျးမငျးရဲ့ အိပျခနျးထဲမှာပါပဲ။
စိုးသီဟက အိမျထောငျသညျ မိနျးမ၊ တဈခုလပျ၊ မုဆိုးမ စတဲ့ မိနျးမတှရေဲ့ အထာကို တျောတျောနပျတဲ့ ကောငျလေးပါ။
ဘယျလိုကိုငျတှယျပွောဆိုပူးကပျရ မလဲဆိုတာ သူကောငျးကောငျးကြှမျးကငျြပါတယျ။
ကမြကို အထိအတှတှေ့နေဲ့ ဖွားယောငျးသိမျးသှငျးခဲ့တာပါ။
ကမြ အိပျခနျး ထဲမှာ မီးကွိုးဆကျပေးတုနျးက အပွုအမူလိုမြိုးတှနေဲ့ အထိအတှတှေ့ပေေးပွီး
ကမြရဲ့ စိတျတှကေိုနှူးဆှလို့ ကမြကို အပိုငျ သိမျးသှားခဲ့တာပေါ့ရှငျ…။
လငျသပွေီး ယောကျြားနဲ့ ကငျးကှာနတေဲ့ကမြ၊ သှေးသားတှေ ဆူဖွိုးထကွှနတေဲ့ ကမြဟာ
စိုးသီဟရဲ့ အထိအတှတှေ့ကေို ကွာရှညျတောငျ့ခံနိုငျစှမျးမရှိခဲ့ဘဲ စိုးသီဟပွုသမြှ နုရတဲ့အခွအေနကေို ရောကျခဲ့ရပါတော့ တယျရှငျ။
နောကျပွီး သားဖွဈသူက အိမျသိပျမကပျတာလညျး ပါတာပေါ့ရှငျ။
သားမရှိတာကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး အတှတှေ့ေ နဲ့ ဖွားယောငျး နောကျဆုံး ကမြကို တကျလိုးသှားတဲ့ အခွအေနကေို ရောကျခဲ့ရပါတော့တယျ။
ကမြဟာ သမီးကြောငျးသှား နတေဲ့အခြိနျမှာ စိုးသီဟ ရောကျလာပွီး
မီးဖိုခြောငျမှာ အလုပျမြားနတေဲ့အခြိနျ စိုးသီဟက နညျးနညျးလေးအငျအားသုံးပွီး တကျလိုးသှားခဲ့တာပါပဲရှငျ။
ကမြ အစက ငွငျးဆနျရုနျးကနျပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူ့လီးကွီးနဲ့ ကမြစောကျဖုတျကို တမေိ့ လိုကျတဲ့အခြိနျနောကျပိုငျးမှာတော့ ကမြကိုယျတိုငျက သူလိုးတာကို အလိုတူအလိုပါ ခံခဲ့မိတာပါရှငျ။
သူ့လီးကွီးကို ဟိုတုနျး က ထိတှခေဲ့ဖူးတာကွောငျ့ တကယျ့စောကျဖုတျကိုဖွဲပွီး လိုးသှငျးပွီဆိုတဲ့အခြိနျရောကျတော့
ကမြကိုယျတိုငျ အားရပါးရကွီး ကို ဖွဲကားခံခဲ့မိပါတော့တယျ။
အဲဒီနကေ့ မီးဖိုခြောငျကွမျးပွငျမှာပဲ စိုးသီဟက ကမြကို ပကျလကျလှနျပေါငျကားခိုငျးပွီး တကျလိုးသှားတာကို ခံခဲ့ရ ပါတယျ။
သူက မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ ခပျကွမျးကွမျးပဲ သူလညျးပွီး ကမြလညျးပွီးအောငျ တကျသုတျရိုကျလိုးသှားခဲ့ပါတယျ။
အဲ ဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ စိုးသီဟ အခှငျ့သငျ့တိုငျး ကမြကို ဖွုတျတော့တာပါပဲရှငျ။
ဖွဈခငျြတော့ ကမြသား မငျးမငျးကလညျး အဲ ဒီရကျတှမှော အိမျပွနျမလာတဲ့ရကျတှေ တျောတျောမြားပါတယျ။
စိုးသီဟကို မေးကွညျ့တော့ ဆျောကွီးတဈဗှနေဲ့ ငွိပွီး အဲဒီ ဆျောကွီး ခရီးထှကျသှားတဲ့နောကျကို ပါသှားတယျလို့သိရပါတယျ။
ကမြသားကို ကမြပွောလို့ မနိုငျဘူးလေ။
နောကျပွီး သား က ကိုယျ့စီးပှားကိုယျရှာပွီး ကိုယျ့ထမငျးကိုယျစားနတေဲ့သူဆိုတော့
ကမြရဲ့စကားကို သားက သိပျပွီး အလေးမထားတော့တာ လညျး ပါတာပေါ့ရှငျ။
သားပွနျမလာတဲ့ရကျတှမှော ညတိုငျးလိုလို စိုးသီဟက အိမျကိုလာပါတယျ။
ကမြသမီး အိပျတဲ့အခြိနျ ပေါ့ရှငျ။
စိုးသီဟက ကမြကို နောကျဖေးတံခါးကို ဖှငျ့ခိုငျးထားတယျ။
သူလာခငျြတယျဆိုရငျ အဲဒီတံခါးကနေ ဝငျလာပွီး ကမြ ကို နှိုးတယျ။
ပွီးရငျ တဈဖကျခနျးက ကမြသား မငျးမငျးအိပျတဲ့ အိပျခနျးထဲမှာ ကမြကို လိုးတော့တာပါပဲ။
ကမြကလညျး မှနျ နပွေီလေ။
လီးပွတျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကာမမှာဆရာတဈဆူလိုကြှမျးကငျြလှတဲ့ စိုးသီဟနဲ့တှပွေီ့း စိုးသီဟ ပွုသမြှနုရတဲ့ အခွေ အနရေောကျခဲ့ရတာပေါ့ရှငျ။
စိုးသီဟကို ကမြ အစှဲကွီးစှဲမိသှားတာပါ။
သူနဲ့တှမှေ့ ကမြဘဝမှာ နှဈနှဈဆယျလောကျ ပေါငျးခဲ့ ဖူးတဲ့လငျကိုတောငျ မလုပျပေးခဲ့ဖူးတဲ့ နညျးလမျးမြိုးတှနေဲ့
စိုးသီဟ စိတျတိုငျးကဖြွဈအောငျ လိုကျလုပျပေးခဲ့မိတဲ့အထိ စိုးသီဟကို ကမြ စှဲလမျးမိခဲ့တာပါ။
အခုလညျး ထုံးစံအတိုငျး ကမြသား မငျးမငျးမရှိတော့ သူ့အိပျခနျးထဲမှာ စိုးသီဟနဲ့ ကမြ ခြိနျးတှနေ့ကွေတာပေါ့ရှငျ။
“ ဟငျ့….မောငျလေး….သှငျးတော့လကှော….အဲလိုကွီး စောကျစိကို လီးနဲ့ကျောကျောထိုးနတေော့ စောကျစိက တအားကငျြလာပွီ….”
စိုးသီဟက ကမြရဲ့ပေါငျနှဈဖကျကို ဖွဲခိုငျးထားပွီး ဒကောကျခှကျကိုလကျနဲ့ ဆှဲကိုငျခိုငျးထားပါတယျ။
အဲဒီတော့ ကမြ ဟာ ပကျလကျအနအေထားနဲ့ ပေါငျကွီးနှဈဖကျကို ဖွဲကားပေးထားနရေတဲ့အနအေထား ရောကျနရေတာပေါ့ရှငျ။
သူက ကမြ ရဲ့ ပေါငျကွားထဲဝငျပွီး ပေါငျဖွဲပေးထားလို့ ပွဲအာနတေဲ့ ကမြစောကျပတျကွီးကို
သူ့လီးဒဈကွီးနဲ့ ပယျပယျနယျနယျထိုးတိုကျ ပှတျနတေော့ ကမြမှာ မရိုးမရှနဲ့ လူးပြံနရေတာပေါ့ရှငျ။
ကမြအောကျမှာ လူးပြံနတောကိုမွငျတော့ စိုးသီဟ အတျောလေး သဘောကနြပေုံပါပဲ။
ဒီကွားထဲ ကမြရဲ့ အင်ျကြီရငျဘတျကွယျသီးတှကေိုဖွုတျထားတော့
ဟာလာဟငျးလငျးဖွဈနတေဲ့ ကမြ ရဲ့ ရငျအစုံကိုလညျး သူကတဈခါတဈခါလှမျးဆှဲပွီး ညှဈပေးနပွေနျပါသေးတယျ။
ကမြ မနနေိုငျအောငျ ရှထနရေပါပွီ။
စောကျ ဖုတျထဲမှာလညျး စောကျရညျကွညျတှကေ ဒလဟောကို စိမျ့ထှကျနတောကွောငျ့
သူ့လီးကွီးနဲ့ ထိုးတိုကျဖိပှတျနတေဲ့အခါ တ ပွဈပွဈနဲ့ အသံတှကေို ထှကျပျေါနရေပွနျပါတယျ။
“ ဟငျ့…မောငျ….မောငျရယျ….လိုးပါတော့ကှာ….မမ တအားရှနပွေီ…သိရဲ့လား….”
ကမြ မရှကျမကွောကျနဲ့ စိုးသီဟကို လိုးပေးဖို့ တောငျးပနျမိပါတော့တယျ။
ပတျဝနျးကငျြလူမွငျကှငျးတှမှော စိုးသီဟ က ကမြကို ရိုးရိုးတနျးတနျး အဈမလို့သာ ချေါပမေယျ့
နှဈယောကျသားတှဆေုံ့လိုးကွတဲ့ အခြိနျမှာဆို စိုးသီဟက ကမြကို ‘ မမခြော ’ လို့ ချေါလရှေိ့ပွီး
အလိုးခံမိတဲ့အခြိနျမှာတော့ ‘ မောငျ ’ လို့ ချေါမိပါတယျ။
စိုးသီဟနဲ့တှမှေ့ ကမြလညျး အရှကျကုနျ ရတယျလို့ ပွောရမလိုပါပဲရှငျ။
တဈခါမှပွော မထှကျခဲ့ဖူးတဲ့ အပွောအဆိုအသုံးအနှုနျးတှကေို ပွောမိလာခဲ့ပါတယျ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ကမြ လီးစုပျတတျလာတာပဲရှငျ။
ကမြရဲ့လငျသားကိုတောငျ တဈခါမှလီးမစုပျပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကမြ စိုးသီဟနဲ့တှမှေ့
ကမြလီးစုပျခငျြလာအောငျ လီးစုပျတတျသှား အောငျ သူက ဖွားယောငျးသိမျးသှငျးခိုငျးစနေိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူကလညျး မိနျးမတှရေဲ့အထာကို ကောငျးကောငျးနပျသူမို့ သူ့ရဲ့ စခေိုငျးမှုတှအေောကျမှာ ကမြ ငွငျးမရနိုငျဖွဈခဲ့တာပါပဲရှငျ။
အဲဒီတုနျးက စိုးသီဟက ကမြကို လှကွေီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနဲ့ တကျလိုး နတေဲ့အခြိနျပါ။
သူ့ဖငျကို ကွှကွှပွီး ဆောငျ့ခလြိုးလိုကျတိုငျး ကမြဟာ နငျ့ကနဲနငျ့ကနဲနအေောငျ ခံရတာကောငျးလှနျးလို့
တ ဟငျးဟငျးနဲ့ငွီးပွီး ကမြရဲ့ရငျအစုံကို ကော့ကော့တငျပွီး အလိုးခံနမေိပါတယျ။
“ မမခြော….ကောငျးလား….” စိုးသီဟက အလိုးအဆောငျ့မပကျြ ကမြကိုမေးပါတယျ။
ကမြခေါငျးကိုညိတျပွပွီး ဖငျဆုံကွီးကိုလညျး ကော့ကော့ ပေးနမေိပါတယျ။
ရငျအစုံကလညျး ကော့တငျပေးနမေိတော့ ကမြရဲ့နို့အုံကွီးတှဟော မို့မောကျတကျနတောပေါ့ရှငျ။
စိုးသီဟ က ကမြနို့ကွီးတှကေို လကျဝါးနဲ့အုပျကိုငျပွီး ခပျတငျးတငျးညှဈဆှဲရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးပေးနပေါတယျ။
ကမြ တျောတျော ကို ဖီးလျတကျနမေိတာပါ။
နှုတျကနတေရှီးရှီးနဲ့ အသံထှကျအောငျငွီးမိပွီး အလိုးခံရတဲ့ ကာမအရသာကို ခံစားနမေိပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ စိုးသီဟက ကမြပါးစပျပေါကျထဲကို သူ့ရဲ့လကျနှဈခြောငျးပူးကာ ထိုးသှငျးပေးလိုကျပါတယျ။
“ ပွှတျ….ပွှတျ…အှနျး….ဟငျး….ဟငျး….ပွှတျ….” ကမြပါးစပျထဲဝငျလာတဲ့ လကျနှဈခြောငျးကို ကမြ အငမျးမရနဲ့ စုပျယူနမေိပါတယျ။
မိနျးမတိုငျး စောကျဖုတျထဲ လီး သှငျးအလိုးခံနရေတဲ့အခြိနျမှာ
အခုလို ပါးစပျထဲလကျညိုးတို့ လကျခလယျတို့ လာထညျ့ရငျ အငမျးမရနဲ့ကို စုပျယူတတျကွတာ ခညျြးပါပဲ။
မယုံရငျ ရှငျတို့ မိနျးမတဈယောကျကို လိုးနရေငျး အဲဒီမိနျးမဖီးလျတကျနတေဲ့အခြိနျမှာ လုပျကွညျ့။
သခြောပေါကျ ကို အငမျးမရနဲ့ကို စုပျယူလိမျ့မယျ။
ကမြ အဲလိုအငမျးမရဖွဈနပေုံကို စိုးသီဟက အပျေါစီးမှ လိုးဆောငျ့ရငျးနဲ့ စီးမိုးကွညျ့ပွီး သဘောအကကြွီး ကလြို့နပေါတယျ။
အရမျးကို ဖီလငျတကျပွီး အလိုးခံလို့ ကောငျးနတောကိုး ရှငျ့။
“ မမခြော…ကနြျော လိုးပေးတာ ခံလို့ ကောငျးရဲ့လား….” “ ပွှတျ…အှနျး….ပွှတျ…အငျး….ဟငျး….ပွှတျ….”
ကမြ သူ့ရဲ့လကျနှဈခြောငျးပူးကို စုပျရငျး မပီမသအသံနဲ့ ပွနျဖွမေိပါတယျ။
“ ကနြေျာ့ လကျခြောငျးတှကေို အလိုးခံနရေငျး စုပျနရေတာ ကွိုကျလား….”
ကမြ ကွိုကျတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ပွနျဖွမေိပွနျပါတယျ။
“ မမခြော….လီးစုပျဖူးလား…” “ ဟှနျ့အှနျး….” ပါးစပျထဲက လကျတှကေို အစုပျရပျပွီး ကမြ ပွနျဖွရေပါတယျ။
ကမြမှာ တကယျလညျး လီးမစုပျခဲ့ဖူးတာကိုးလီးစုပျ တယျဆိုတာကို စကားအဖွဈသာ ကွားဖူးနခေဲ့ပွီး တဈခါဘူးကမှ မစုပျဖူးဘူးလေ။
“ အခု ကနြျောလိုးပေးနရေငျး ပါးစပျထဲက လကျနှဈခြောငျးကို လီးလို့သဘောထားပွီး စုပျကွညျ့စမျး….
မမခြော ပိုပွီး အရသာတှလေ့ာလိမျ့မယျ….လီးကွီးကို စုပျနတေယျလို့ တှေးပွီး စုပျကွညျ့စမျး….”
စိုးသီဟက ကမြရဲ့စိတျတှကေို အစှမျးကုနျထနျပွငျးလာအောငျ စကားလုံးတှနေဲ့ နှူးဆှပွီး
ကမြပါးစပျထဲက လကျနှဈ ခြောငျးပူးကိုလညျး ကမြပါးစပျထဲ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျနဲ့ စောကျဖုတျကို လိုးသလို လှုပျရှားပေးနပေါတယျ။
စောကျဖုတျထဲ ကိုလညျး ခုနက လိုးနဆေောငျ့နတေဲ့အရှိနျထကျပွငျးတဲ့ ဆောငျ့ခကျြတှနေဲ့ ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးပါတော့တယျ။
ကမြမှာ စောကျဖုတျထဲ နငျ့နငျ့နဲနဲဝငျလာတဲ့ လီးကွောငျ့ ပူထူကငျြဆိမျ့ပွီး အရသာကောငျးလှနျးလို့
စိုးသီဟပွောတဲ့အတိုငျး သူ့လကျ နှဈခြောငျးကို လီးအမှတျနဲ့ အငမျးမရတပွှတျပွှတျမွညျအောငျ စုပျပေးနမေိပါတော့တယျ။
စိုးသီဟကလညျး ကမြအရမျးဟော့ နပွေီမှနျးသိတော့ ပွငျးထနျအားပါတဲ့ ဆောငျ့ခကျြတှနေဲ့ ပကျပကျစကျစကျမညှာတမျးကို ဆောငျ့လိုးပါတော့တယျရှငျ။
စိုးသီဟ ဆောငျ့ခကျြတှကေ အားပါပွီး ပွငျးထနျလှနျးလှတာကွောငျ့ သူ့လီးရှညျရှညျကွီးထိပျက ဒဈထိပျကွီးနဲ့ ကမြသားအိမျ ကို တဒုတျဒုတျနဲ့ လာထိုးတိုကျနပေါတယျ။
ကမြလေ မကျြစိကိုစုံမှိတျပွီး စိုးသီဟ လကျကို လီးတဈခြောငျးအဖွဈမွငျယောငျ ခံစားပွီး အငမျးမရစုပျနရေငျး
စောကျဖုတျထဲက လီးကိုလညျး အတှငျးသားတှနေဲ့ အတငျးဆှဲညှဈပေးနမေိပါတယျ။
အ….မမခြောရာ….ကနြေျာ့ လီးကို ဆှဲညှဈပေးထား….လုပျ…လုပျ….ဖငျကွီးကိုလညျး ကော့ ကော့ပေး….
ဟုတျပွီ….အ….အီး…..အ…. စိုးသီဟ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနတေဲ့အသံ၊
ကမြ အငမျးမရနဲ့ ဏှာထနျပွီး လကျကို တပွှတျပွှတျနဲ့ စုပျယူနမေိတဲ့အသံ၊
စိုးသီဟတဈယောကျ ဖီလငျတှတေကျပွီး ညညျးညူအျောဟဈနတေဲ့အသံတှကေ
တိုးတိုးကွိတျကွိတျနဲ့ အခနျးထဲမှာ ထှကျ ပျေါနပေါတယျ။
ခဏကွာတော့ စိုးသီဟရဲ့ခါးက ဆတျကနဲဖွဈသှားပွီး ကမြစောကျခေါငျးထဲ ပူခနဲ ဖွဈသှားကာ
သူ၏ လရညျ တှကေို ပနျးထုတျပဈလိုကျပါတော့တယျ။
ကမြ စောကျခေါငျးတဈလြှောကျ ပူနှေးသှားတဲ့အတှေ့၊
သူ့ရဲ့ အဆုံးသတျဆောငျ့ ခကျြပွငျးပွငျးကွောငျ့ ကမြလညျး တဈခြီပွီးသှားရပွနျပါတယျ။
စိုးသီဟက တဈခြီပွီးသှားတော့ ကမြဘေးမှာ အမောဖွဝေငျလှဲ ရငျး ခဏနားနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လကျတဈဖကျက ကမြရဲ့နို့အုံထှားထှားကွီးတဈဖကျပျေါကိုတငျပွီး
ကမြနို့သီးခေါငျးထှား ထှားကွီးတှကေို ကိုငျကစားလို့နပေါသေးတယျ။
ကမြ စိုးသီဟရဲ့ ရငျခှငျထဲတိုးဝငျလိုကျပွီး သူ့ကိုဖကျထားလိုကျမိပါတယျ။
ကမြ သူ့ကို အရမျးစှဲလနျးပွီး ခဈြမိနတောကိုးရှငျ့။
“ မမခြော….ပွီးသှားရဲ့လား….” “ အို…ဘာတှလောမေးနတောလဲ….မသိဘူး…သှား….”
ကမြရှကျသှားရပွီး သူ့ရငျခှငျထဲခေါငျးကို တိုးဝငျနမေိပါတယျ။
သူက ကမြရဲ့လကျတဈဖကျကို ဆှဲယူပွီး သူ့လီးကို ကိုငျခိုငျးပွနျပါတော့တယျ။
ကမြကလညျး မကိုငျခငျြကိုငျခငျြပုံစံနဲ့ပဲ စိတျပါလကျပါ ကိုငျပေးနမေိပွနျပါတယျ။
“ မမခြော….ကနြျော လိုးပေးတာ ကောငျးရဲ့လား….” “ အို…မောငျကလညျး….”
“ ဖွနေျော….မဖွရေငျ နောကျတဈခါ တကျလိုးပဈလိုကျမှာ….”
“ အငျး….အငျး….ကောငျးတယျ….ဘာမှနျးလဲ မသိဘူး….လူကို သိပျအနိုငျကငျြ့တာပဲ….အရမျးဆိုးတယျ….”
ကမြ ရှကျရှံ့သလိုလေးဖွရေငျး သူ့ကို ခဈြစနိုးနဲ့ အပွဈတငျစကားဆိုမိပါတယျ။
သူနောကျတဈခါ ထပျလိုးမှာကို အပွဈမွငျတာ မဟုတျပါဘူးရှငျ။
မမခြော….ကနြေျာ့ကို လီးစုပျပေးပါလား….” “ အာ….မစုပျခငျြပါဘူး….တဈခါမှလညျး မစုပျဖူးဘူး….”
“ လုပျပါ မမခြောရာ….စုပျပေးပါ….ကနြျော မခြော နှုတျခမျးလေးတှနေဲ့ စုပျပေးတာကို ခံခငျြလို့ပါ….”
စိုးသီဟက ကလေးတဈယောကျလို ကမြကို ပူဆာလို့နပေါတယျ။
ကမြနို့ကွီးတှကေို ဖဈြညှဈလိုကျ၊ ကမြ တငျသား ကွီးတှကေို ဆုပျကိုငျဖဈြညှဈလိုကျနဲ့ အတငျးကို လီးစုပျခိုငျးနပေါတော့တယျ။
ကမြကိုယျတိုငျလညျး တဖွေးဖွေးနဲ့ လီးစုပျဖို့ကို စိတျပါလာသလိုဖွဈလာရပါတယျ။
ခုနအလိုးခံနရေငျး သူ့လကျနှဈခြောငျးကို လီးအမှတျနဲ့ အားပါးတရစုပျခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီလငျကို ပွနျအမှတျရပွီး
နောကျဆုံးတော့ သူ့သဘောဆန်ဒအတိုငျး လီးစုပျပေးဖို့ လိုကျလြောမိပါတော့တယျရှငျ။
“ မငျး….တျောတျောဆိုးတယျသိလား….မမ အဲလို တဈခါမှလုပျဖူးတာ မဟုတျဘူး….”
“ အငျးပါ…မမခြောရာ…ကနြေျာ့ကိုခဈြရငျ စုပျပေးပါတော့နျော….”
နောကျဆုံးတော့လညျး ကမြ သူ့လီးကို ပါးစပျထဲငုံပွီး မစုပျတတျစုပျတတျနဲ့ စုပျပေးမိတော့တာပါပဲ။
အဲဒီနောကျမှာ တော့ စိုးသီဟက လီးစုပျခံရငျး ကမြကို လီးစုပျနညျးတှသေငျပေးရငျး သူ့စိတျကွိုကျကို စုပျခိုငျးပါတော့တယျ။
အဲဒီကစလို့ စိုးသီဟက ကမြကို လာလိုးတိုငျး သူ့လီးကို ကမြကိုယျတိုငျက စိတျပါလကျပါနဲ့ ဆှဲစုပျမိတော့တာပါပဲရှငျ။
အခုလညျး သူ့ကို ကမြလီးစုပျပေးပွီးလို့ အလိုးခံဖို့ ပကျလကျလှနျပေါငျဖွဲပွီး
ဒကောကျခှကျကို ဆှဲမကာ စောကျဖုတျကွီးကို အစှမျးကုနျကော့ တငျဖွဲကားပေးထားတာပါ။
ဒါကို သူက မလိုးပေးသေးဘဲ ကမြ စောကျဖုတျပွဲပွဲကွီးကို သူ့လီးဒဈကွီးနဲ့ ထိုးတိုကျပှတျဆှပွီး
ကမြရဲ့ ရမကျဆန်ဒတှကေို ထကွှသထကျထကွှအောငျ ပွုလုပျပေးနပေါတယျ။
“ မောငျ….လိုးထညျ့လိုကျပါတော့ မောငျရယျ….မမ စောကျဖုတျထဲ မငျး လီးကွီးကို လိုးထညျ့လိုကျပါတော့….
အဟငျ့ …ဟငျ့….မမ မနတေတျတော့ဘူး….ဟငျး….လိုးပါတော့နျော….” ကမြ ဘယျလိုမှမခံစားနိုငျတော့ပါဘူးရှငျ။
လီးစုပျပေးနတေုနျးကတညျးက စိတျတှထေကွှနခေဲ့ခွငျးကွောငျ့ အလိုးခံ မညျ့အခြိနျရောကျပွနျတော့
မလိုးပေးသေးဘဲ ရှထနအေောငျ ဆှပေးနလေတေော့
ကမြနှုတျက မရှကျမကွောကျနဲ့ပဲ လိုးပေး ဖို့ တဈတဈခှခှဖှငျ့ဟပွောပွီး တောငျးဆိုလိုကျမိပါတော့တယျ။
ကမြရဲ့ အငမျးမရ ဏှာထနျနတေဲ့ပုံနဲ့ တဈတဈခှခှစကားသံကို ကွားရမွငျရတော့မှ
စိုးသီဟက သူ့လီးကွီးကို ကမြစောကျခေါငျးပေါကျဝသို့တပွေီ့း တရှိနျထိုးဆောငျ့လိုးသှငျးပဈလိုကျပါ တော့တယျရှငျ….
ကျမတို့ အိမ်ထောင်သက် နှစ်(၂၀)လောက်မှာပဲ ကျမရဲ့အမျိုးသားဟာ အက် ဆီးဒင့်တစ်ခုကြောင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမဟာ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ၊ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်နဲ့ မုဆိုးမဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျမယောက်ျားက ကျမကို အတော်လေးချစ်ပါတယ်။သူဆုံးပါးသွားတဲ့အချိန်ထိ ကျမကို စောင့် ရှောက်ခဲ့တုန်းပါပဲ။သူအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက် လျော်ကြေးရတဲ့ငွေနဲ့ ကျမဟာ စက်ဆန်းဘက်မှာ ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆို ကျမရဲ့သားအကြီး မင်းမင်းတောင် အသက်(၁၈)နှစ်ကျော် လူပျိုပေါက်အရွယ် ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ပိုလျှံတဲ့ ငွေ လေးနဲ့ ကျမတို့ မိသားစုသုံးယောက်ဟာ လည်ပတ်စားသောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။သမီးအငယ်လေးကလည်း ခုဆို ဒုတိယတန်းတက်နေတဲ့အရွယ်တောင် ရောက်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျမဟာ လင်သားဆုံးပါးသွားတဲ့ အချိန်ကစလို့ ကျမရဲ့စိတ်တွေကို သားနဲ့ သမီးအပေါ်မှာပဲ ပုံထားခဲ့ပါတယ်။လင်ဖြစ်သူမရှိတော့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကာမအရ သာ၊ အထိအတွေ့တွေနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့ရပါတယ်။ထိုကာလအတွင်း၌ ကာမစိတ်ဆန္ဒများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တောင့်တမိသ လိုရှိခဲ့သော်လည်းသားလူပျိုပေါက်နဲ့ သမီးမျက်နှာတို့ကို ထောက်ထားပြီး အသစ်ရှာတာမျိုး၊ ကွယ်ရာမှာ ခိုးစားတာမျိုးတောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။မိန်းမသားတစ်ယောက်ပဲရှင်…။အသက်ကလည်း (၃၈)နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ကျမ သွေးသား တွေက ထကြွသောင်းကျန်းတုန်းပေါ့။လင်နဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ပေါင်းခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အနားမှာ ယောက်ျားသား မရှိတော့ တခါတရံ ခံစားထိတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရာကို တောင့်တမိတာပေါ့ရှင်။ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ကာမဆန္ဒတွေကို ချုပ်တီးနေခဲ့ပါ တယ်။တချို့မိန်းမတွေ ပြောပြောနေတဲ့ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကို ကိုယ့်ဘာသာပွတ်ပြီး အာသီသဖြေတဲ့ အပြုအမူမျိုးကိုတောင် ကျမ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး တကယ်ပါ။ဒါပေမယ့် ကျမတို့မိသားစု စက်ဆန်းဘက်ကို ပြောင်းပြီး အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကျမရဲ့စိတ်၊ ကျမရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာ ကျမသားအကြီးကောင် မင်းမင်းကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတော့တယ်ရှင်။
ကျမသား မင်းမင်းက ဒီရပ်ကွက်ထဲပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက် လူပေါင်းစုံနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်တယ်။ပေါင်းသင်းတဲ့လူတွေ ကလည်း သူ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေ များပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှ စိုးသီဟဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ကျမသားက အတော်လေး ခင်မင် ရှာပါတယ်။စိုးသီဟက ကျမသားထက် (၅)နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ရပ်ကွက်ထဲမှာ အခွေတွေရောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ကောင် လေးပါ။သားက အဲဒီကောင်လေးကို အိမ်ကို ခေါ်ခေါ်လာတတ်တယ်။အိမ်မှာ စားကြ သောက်ကြနဲ့ အမြဲလို ဝင်ထွက်သွား လာနေခဲ့ပါတယ်။
ဖခင်ရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုမဲ့သွားတဲ့သားက ကျမရဲ့ပြောစကားကို သိပ်ပြီးအလေးမထားတော့ပါဘူးရှင်။
နောက်ပြီး အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သားက တာဝန်ယူထားပြန်တော့
ကျမဟာ သားကို ဖိဖိစီးစီးပြောဆိုမရနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်
သားဖြစ်သူ အိမ်မှာ သောက်စားနေတာကိုတောင် ခွင့်ပြုပေးထားရပါတော့တယ်။
စိုးသီဟ ကို အိမ်ပေါ် ခေါ်လာပြီး အိမ်မှာပဲ စားကြသောက်ကြ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လူငယ်သဘာဝနေကြတာကို ကျမ ကြည်ဖြူစွာပဲ လွှတ်ထား လိုက်မိပါတယ်။
စိုးသီဟက ကျမကို “ အစ်မ…အစ်မ…” နဲ့ ရိုရိုသေသေပြောဆိုဆက်ဆံပြန်တော့
စိုးသီဟကို ယုံကြည်ပြီး သားကိုတောင် ပြောဆိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့ အပ်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတရံ စိုးသီဟရဲ့ အကြည့်တွေကို ကျမ မကြိုက်လှပါ ဘူးရှင်။
သားလစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆို ကျမကို စူးစူးရဲရဲကြည့်တတ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ကျမကို ပုံမှန်ပြောဆို ဆက်ဆံတာဆိုတော့ ကျမလည်း မသိကျိုးကျွံပြုထားမိပါတယ်။
နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ထွားထွားအိအိနဲ့ ခပ်ချောချောမိန်းမတစ် ယောက်ပါ။
ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဗိုက်ကလေးနည်းနည်းပူတာကလွဲလို့ ရင် အစုံက မို့မောက်တင်းရင်းနေဆဲပါပဲ။
ခါးကလည်း အဆီမရှိသိမ်ကျဉ်းပြီး တင်သားတွေကလည်း ကားစွင့်တင်းရင်းနေတုန်းပါပဲ ရှင်။
ကျမကို ကမ်းလှမ်းချဉ်းကပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။
ကျမသားလူပျိုပေါက်နဲ့ သမီးငယ်တို့ကို ထောက်ထားပြီး အသစ်မရှာခဲ့တာပါ။
ယောက်ျားနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကင်းကွာနေတော့ ကျမရဲ့အသွေးအသားတွေ၊
ခန္ဓာကိုယ် ပေါ်က အဖုအထစ်၊ အမို့အမောက်၊ အကားအစွင့်တွေက ပိုပြီးစိုပြေတစ်ရစ်နေတာပေါ့ရှင်။
ကျမရဲ့နုပျိုမှုတွေကို စိုးသီဟဆိုတဲ့ ကောင်လေးက မျက်စိကျနေပုံရပါတယ်။
ယောက်ျားတိုင်းလိုလို တပ်မက်ကြတဲ့ ကျမခန္ဓာကိုယ်ကို အဲဒီကောင်လေးလည်း တပ်မက်မိမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကျမက စိုးသီဟရဲ့ အကြည့်တွေကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံနေခဲ့ပါ တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ စိုးသီဟက အဲဒီလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်ဘူးရှင့်။
သားမ ရှိလည်း အိမ်ကို ဝင်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျမသားအပြင်သွားတဲ့အချိန်တွေနဲ့ ကျမသမီးငယ်ကျောင်းသွား နေတဲ့အချိန်တွေဆို အိမ်ကို ရောက်ရောက်လာပါတယ်။
အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲရှိနေတဲ့ ကျမကို စကားပြောရင်း ရယ်ကာ မောကာနှင့် ခြေတို့လက်တို့တွေ လုပ်လာပါတယ်။
အကြမ်းဖက်တာမျိုး၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာမျိုးမဟုတ်တော့ ကျမဘက် ကလည်း သူ့ကို ခါးခါးသီးသီးမတုန့်ပြန်ခဲ့မိပါဘူးရှင်။
နောက်တစ်ချက်က သားဖြစ်သူ မင်းမင်းက စိုးသီဟကို ဆရာတင်ပြီး ခင် မင်နေသလို
ကျမသမီးငယ် နှင်းဝေလွင်လေးကလည်း စိုးသီဟကို ခင်မင်နေတာတွေကြောင့်လည်း
ကျမက သူ့အပြုအမူတွေ ကို အပြစ်မမြင်မိဘဲ အလိုက်အထိုက်နေနေမိတာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်….။
စိုးသီဟက လူပုံခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ မိန်းကလေးတွေကျလောက်တဲ့ ရုပ်မျိုး။
ဒါပေမယ့် နာမည် ပျက်ရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာအနေကြာလာတော့ မိန်းမချင်းအတင်းပြောကြတဲ့ စကားဝိုင်းကနေ စိုးသီဟ အ ကြောင်းကို ကျမ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းက…. “ ဟဲ့ စန်းရီ…နင် မိဇင်အကြောင်းကြားပြီးပြီလား….” “ ဘာများတုန်း အဝင်းရဲ့….”
“ မိဇင်က အခု ဟိုကောင်လေး စိုးသီဟကို ကုန်းနေတယ်ဆိုပဲ….”
မိန်းမတွေ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီး ရပ်ကွက်ထဲက အတင်းအဖျင်းမှန်သမျှ ဝိုင်းဖွဲ့ကာ စုပြောနေတဲ့ဆီ အမှတ်တမဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ ကျမဟာ
စိုးသီဟဆိုတဲ့ နာမည်ပါလာတာနဲ့ အသေအချာနားထောင် နေမိပါတယ်။
“ မိဇင် ယောက်ျား ထွန်းရွှေက ကိုယ်တစ်ပိုင်းလေဖြတ်နေမှတော့ ကောင်မက ဆာနေပြီပေါ့ဟဲ့….
ဟိုနေ့က ပုဇွန် တောင်ဘက်က တည်းခိုခန်းထဲ မိဇင်နဲ့ စိုးသီဟတို့ အတူတူတွဲဝင်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်တဲ့….”။
“ဟုတ်ရဲ့လား အဝင်းရယ်….” “ အော်…ငါက မဟုတ်တဲ့ သတင်းကို ဘယ်တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးလို့လဲ….”
“ အဲဒီ စိုးသီဟ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက မမြင့်ရီနဲ့လည်း ဖြစ်သေးတယ်မဟုတ်လား အဝင်းရဲ့….”
“ အေးလေ….မမြင့်ရီက အခုပျဉ်းမနားမှာ တာဝန်ကျလို့ ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့
သူတို့အကြောင်းကိုသိထားတဲ့ မိဇင် က စိုးသီဟကို ဆွဲစိလိုက်တာနေမှာပေါ့အေ….”
“ စိုးသီဟက ရုပ်ကလေးသနားကမားနဲ့ သူနဲ့ရွယ်တူကောင်မလေးတွေကို မတွဲဘူးနော် အဝင်း….
တစ်ခုလပ်မတို့ လင်ရှိမိန်းမတို့နဲ့ပဲ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်….အဟင်း….ဟင်း….” စိုးသီဟအကြောင်းတွေက မကြားချင်မှအဆုံးပါပဲရှင်။
ဒါတောင် စိုးသီဟကို လင်ရှိနေလျက်နဲ့ ကြောင်တောင်နှိုက်ချင် နေတဲ့မိန်းမတွေက တစ်ပုံကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပဲ။
စိုးသီဟရဲ့ ဇ ကိုသိလာရတော့ ကျမဟာ စိုးသီဟနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ စိတ်ထဲလှုပ်ခတ်လာမိပါတယ်။
သူက မုဆိုးမ၊ တစ်ခုလပ်၊ လင်ရှိ မိန်းမတွေနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေကျလူဆိုတော့ ကျမကိုလည်း ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့ရှင်….။
တစ်နေ့မှာတော့ ကျမရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် အခြေအနေနဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုကို စတင် လျှောက်လှမ်းခဲ့မိပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ကျမသား မင်းမင်းက အိမ်မှာမရှိဘူး။
သမီးငယ် နှင်းဝေလွင်နဲ့ ကျမပဲ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ စိုးသီဟ တစ်ယောက် အိမ်ကို ရောက်ချလာပါတယ်။
“ အစ်မ…အိပ်ခန်းမီးမလင်းတော့လို့ဆို…မင်းမင်း ပြောလို့….သူ မလုပ်တတ်လို့ ကျနော့်ကို လုပ်ပေးပါဆိုတာနဲ့ ထွက်လာတာ….”
“ အော်….အေး…ဟုတ်တယ်…မောင်လေးရဲ့….အစ်မ လည်း မလုပ်တတ်ဘူး….
တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအုံး ကွယ်….မီးချောင်းကျွမ်းသွားတာလား မသိဘူး….”
စိုးသီဟက ကျမတို့ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်။
ကျမတို့ အိမ်က ပေ(၂၀)(၆၀) မြေကွက်ပေါ်မှာ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး တစ်ထပ်အိမ်လေးပုံစံပါ။
အိမ်ထဲမှာ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ စတိုခန်းလို အခန်းကျဉ်းတစ်ခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်တို့ ဖွဲ့စည်းထားပါ တယ်။
မင်းမင်းက တစ်ယောက်ထဲ တစ်ခန်းအိပ်ပြီး ကျမနဲ့ သမီးက တစ်ခန်းသပ်သပ် အိပ်ပါတယ်။
မီးမလာတာက ကျမတို့ အိပ်ခန်းပါ။
“ အစ်မရေ….တစ်ချက်လောက် လာကူပါအုံးဗျာ….” အိပ်ခန်းထဲမှ စိုးသီဟရဲ့ အသံကြောင့် ကျမရော သမီးပါ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ယောက်ထဲဆိုရင် မသင့် တော်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွက် သမီးကိုပါ အဖော်အဖြစ် ခေါ်သွားခဲ့တာပါ။
“ ဒီမှာ ဆက်ထားတဲ့ ဝါယာက ပျက်နေတာ အစ်မ….ကတ်ကြေးလိုတယ်….နောက်ပြီး မိန်းခလုတ်လည်း ချပေးထား ပါအုံး….”
“ သမီး နင့်အကိုကြီးကို ကတ်ကြေးယူပေးလိုက်….အမေ…မိန်းသွားချလိုက်မယ်….”
“ အစ်မက ဒီမှာနေပြီး ကျနော့်ကို ကူရမှာဗျ….နှင်းဝေကို မိန်းချခိုင်းပြီး အဲဒီမှာ ခဏစောင့်ခိုင်းလိုက်ပါလား….
ဒီကရ ရင် လှမ်းပြောလိုက်မယ်….မီးလာ မလာစမ်းရအောင်….”
စိုးသီဟက ကျမသမီးကို အပြင်ဘက်မိန်းရှိရာသို့ ပထုတ်လိုက်မှန်း ကျမရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။
ကတ်ကြေးယူပေးရင်း စိုးသီဟအနားမှာ ရပ်နေမိပါတယ်။
အဲဒီမှာ စိုးသီဟက စတော့တာပါပဲ….။
“ အစ်မ…ဒီကြိုးလေး ကိုင်ပေးထား….” “ အင်း…ဟို…ဓာတ်တော့ မလိုက်ပါဘူးနော်….”
“ မလိုက်ပါဘူး အစ်မရဲ့….နှင်းဝေကို မိန်းချခိုင်းထားတာပဲဟာ….နှင်းဝေရေ….မိန်းကို သေချာချထားရဲ့လား….”
“ ဟုတ်…ချထားတယ် အကိုကြီး….” စိုးသီဟက အပြင်ဖက်မှ နှင်းဝေကို သေချာအောင် အော်မေးလိုက်သေးတယ်။
ပြီးမှ ကျမကို ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်း ကို ကိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။
ဝါယာကြိုးက ကျမအရပ်ထက် နည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာမှာ သွယ်ထားတာဆိုတော့
ကျမလက်ကို အ စွမ်းကုန်မြှောက်ပြီး ဝါယာကြိုးကို ကိုင်ထားရပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကျမရဲ့ရင်အစုံက လက်မြှောက်ထားခြင်းကြောင့် မို့မောက် ကြွတက်နေပြီး
မမှီမကမ်းနဲ့ ခြေဖျားလေး ထောက်ထားပြန်တော့ တင်သားအစုံကလည်း ကော့တက်ကောက်ချိတ်နေတာပေါ့ ရှင်။
အဲလိုအနေအထားဖြစ်နေတဲ့ ကျမကို စိုးသီဟက တစ်ကိုယ်လုံးသိမ်းကြုံးကြည့်ပြီး တံတွေးကို မျိုချနေတာ ကျမမြင်နေရပါတယ်။
ပြီးလည်း ပြီးရော…. “ အို…” ကျမနှုတ်က ခပ်တိုးတိုးအသံလေး ထွက်သွားရပါတယ်။
သူက ကျမနောက်တည့်တည့်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျမဖင်ဆုံ ကြီးကို တိုးဖိကပ်လိုက်တာကြောင့်ပါ။
ပုဆိုးဝတ်ထားတာတောင် အတော်လေးရှေ့ကို ငေါထွက်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးနဲ့ ကျမ ဖင်ကို ဖိကပ်လို့ထားပါတယ်။
ကျမရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားရသလို နားရွက်ဖျားတွေလည်း ပူထူသွားရပါတယ်။
သူ့ပုဆိုး အောက်ကဟာကြီးက မနည်းမနောလားရှင်။
ဒီကြားထဲ မတ်ထောင်ပြီး တင်းနေသေးပါတယ်။
အထိအတွေ့အရ စိုးသီဟရဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ အတော်လေးကြီးပြီး ရှည်မယ်ဆိုတာ ကျမခန့်မှန်းမိပါတယ်။
“ အစ်မ…ကြိုးကို မလွှတ်လိုက်နဲ့နော်….ကျနော် ပြန်ဆက်နေပြီ….”
စိုးသီဟက ကျမနောက်နားကနေ ပုခုံးကိုကျော်ပြီး ကျမနားရွက်နားကပ်ကာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှက်စိတ်၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကျမဟာ သူပြောတဲ့အတိုင်း ပုံစံမပျက်ဘဲ ဝါယာကြိုးကို ကိုင်ထားပေးနေမိတော့ သူ
က လည်း ကျမဖင်ကို သူ့လီးနဲ့ စိတ်ကြိုက်ကို ဖိထောက်ထားလို့ ရနေတာပေါ့ရှင်….။
အချိန်က နှစ်မိနစ်ကျော်ကျော်လေးပဲ ကြာ သွားတာပါ။
ကျမရဲ့ နားရွက်နားကိုကပ်ပြီး ကျမနားရွက်ကို သူ့လျှာဖျားလေးနဲ့ မထိ တထိ လှမ်းထိုးလိုက်ရင်း….
“ အစ်မ…ရပြီ…လွှတ်လိုက်တော့လေ….” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်။
ကျမတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖုလေးတွေ ထသွားပြီး ရင်တွေလည်း အရမ်းကို ခုန်နေမိပါတယ်။
စိုးသီဟက အပြင်က ကျမသမီးကို အော်ပြောလိုက်သံကြားမှ ကျမစိတ်ကို မနည်းပြန်ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။
ကျမဟာ အထိအတွေ့ကြောင့် ကြောင်ရပ်နေမိတာကိုးရှင့်။
ကျမ စိုးသီဟရဲ့အကြံကို ခုမှသေချာနားလည်လိုက်ရပါတယ်။
သူက ကျမ သမီးကို အပြင်မှာ ပထုတ်ထားပြီး ကျမကို အပိုင်ကိုင်သွားတာကိုးရှင့်။
“ အိုကေ….လင်းသွားပြီ….” မီးက ပြန်လင်းသွားပါပြီ။
ကျမမှာတော့ စောစောက ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ စိုးသီဟရဲ့ လီးတန်ကြီးကြောင့်
“ အဟင့်….ဖြေးဖြေးလုပ်နော်….သမီး နိုးသွားမယ်….” “ အင်းပါ…မမချောရဲ့….”
“ ဟွန်း…လူကို ညာညာပြီး လာအနိုင်ကျင့်တယ်…အိုး…ဟင့်…ဖြေးဖြေးသွင်းနော်….အင်း…ဟင့်….”
အထက်ပါစကားသံတွေက ကျမအိချောဝေနဲ့ စိုးသီဟတို့ ပြောနေကြတဲ့ စကားသံတွေပါ။
ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ ကျမရဲ့အိမ်၊ ကျမသား မင်းမင်းရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာပါပဲ။
စိုးသီဟက အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ၊ တစ်ခုလပ်၊ မုဆိုးမ စတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အထာကို တော်တော်နပ်တဲ့ ကောင်လေးပါ။
ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ပြောဆိုပူးကပ်ရ မလဲဆိုတာ သူကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်။
ကျမကို အထိအတွေ့တွေနဲ့ ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းခဲ့တာပါ။
ကျမ အိပ်ခန်း ထဲမှာ မီးကြိုးဆက်ပေးတုန်းက အပြုအမူလိုမျိုးတွေနဲ့ အထိအတွေ့တွေပေးပြီး
ကျမရဲ့ စိတ်တွေကိုနှူးဆွလို့ ကျမကို အပိုင် သိမ်းသွားခဲ့တာပေါ့ရှင်…။
လင်သေပြီး ယောက်ျားနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ကျမ၊ သွေးသားတွေ ဆူဖြိုးထကြွနေတဲ့ ကျမဟာ
စိုးသီဟရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ကြာရှည်တောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘဲ စိုးသီဟပြုသမျှ နုရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတော့ တယ်ရှင်။
နောက်ပြီး သားဖြစ်သူက အိမ်သိပ်မကပ်တာလည်း ပါတာပေါ့ရှင်။
သားမရှိတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အတွေ့တွေ နဲ့ ဖြားယောင်း နောက်ဆုံး ကျမကို တက်လိုးသွားတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ကျမဟာ သမီးကျောင်းသွား နေတဲ့အချိန်မှာ စိုးသီဟ ရောက်လာပြီး
မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အချိန် စိုးသီဟက နည်းနည်းလေးအင်အားသုံးပြီး တက်လိုးသွားခဲ့တာပါပဲရှင်။
ကျမ အစက ငြင်းဆန်ရုန်းကန်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်ကို တေ့မိ လိုက်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျမကိုယ်တိုင်က သူလိုးတာကို အလိုတူအလိုပါ ခံခဲ့မိတာပါရှင်။
သူ့လီးကြီးကို ဟိုတုန်း က ထိတွေ့ခဲ့ဖူးတာကြောင့် တကယ့်စောက်ဖုတ်ကိုဖြဲပြီး လိုးသွင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့
ကျမကိုယ်တိုင် အားရပါးရကြီး ကို ဖြဲကားခံခဲ့မိပါတော့တယ်။
အဲဒီနေ့က မီးဖိုချောင်ကြမ်းပြင်မှာပဲ စိုးသီဟက ကျမကို ပက်လက်လှန်ပေါင်ကားခိုင်းပြီး တက်လိုးသွားတာကို ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
သူက မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ သူလည်းပြီး ကျမလည်းပြီးအောင် တက်သုတ်ရိုက်လိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ စိုးသီဟ အခွင့်သင့်တိုင်း ကျမကို ဖြုတ်တော့တာပါပဲရှင်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျမသား မင်းမင်းကလည်း အဲ ဒီရက်တွေမှာ အိမ်ပြန်မလာတဲ့ရက်တွေ တော်တော်များပါတယ်။
စိုးသီဟကို မေးကြည့်တော့ ဆော်ကြီးတစ်ဗွေနဲ့ ငြိပြီး အဲဒီ ဆော်ကြီး ခရီးထွက်သွားတဲ့နောက်ကို ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကျမသားကို ကျမပြောလို့ မနိုင်ဘူးလေ။
နောက်ပြီး သား က ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတဲ့သူဆိုတော့
ကျမရဲ့စကားကို သားက သိပ်ပြီး အလေးမထားတော့တာ လည်း ပါတာပေါ့ရှင်။
သားပြန်မလာတဲ့ရက်တွေမှာ ညတိုင်းလိုလို စိုးသီဟက အိမ်ကိုလာပါတယ်။
ကျမသမီး အိပ်တဲ့အချိန် ပေါ့ရှင်။
စိုးသီဟက ကျမကို နောက်ဖေးတံခါးကို ဖွင့်ခိုင်းထားတယ်။
သူလာချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီတံခါးကနေ ဝင်လာပြီး ကျမ ကို နှိုးတယ်။
ပြီးရင် တစ်ဖက်ခန်းက ကျမသား မင်းမင်းအိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျမကို လိုးတော့တာပါပဲ။
ကျမကလည်း မွှန် နေပြီလေ။
လီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကာမမှာဆရာတစ်ဆူလိုကျွမ်းကျင်လှတဲ့ စိုးသီဟနဲ့တွေ့ပြီး စိုးသီဟ ပြုသမျှနုရတဲ့ အခြေ အနေရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ရှင်။
စိုးသီဟကို ကျမ အစွဲကြီးစွဲမိသွားတာပါ။
သူနဲ့တွေ့မှ ကျမဘဝမှာ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ပေါင်းခဲ့ ဖူးတဲ့လင်ကိုတောင် မလုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့
စိုးသီဟ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် လိုက်လုပ်ပေးခဲ့မိတဲ့အထိ စိုးသီဟကို ကျမ စွဲလမ်းမိခဲ့တာပါ။
အခုလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကျမသား မင်းမင်းမရှိတော့ သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ စိုးသီဟနဲ့ ကျမ ချိန်းတွေ့နေကြတာပေါ့ရှင်။
“ ဟင့်….မောင်လေး….သွင်းတော့လေကွာ….အဲလိုကြီး စောက်စိကို လီးနဲ့ကော်ကော်ထိုးနေတော့ စောက်စိက တအားကျင်လာပြီ….”
စိုးသီဟက ကျမရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲခိုင်းထားပြီး ဒကောက်ခွက်ကိုလက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျမ ဟာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲကားပေးထားနေရတဲ့အနေအထား ရောက်နေရတာပေါ့ရှင်။
သူက ကျမ ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး ပေါင်ဖြဲပေးထားလို့ ပြဲအာနေတဲ့ ကျမစောက်ပတ်ကြီးကို
သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိုးတိုက် ပွတ်နေတော့ ကျမမှာ မရိုးမရွနဲ့ လူးပျံနေရတာပေါ့ရှင်။
ကျမအောက်မှာ လူးပျံနေတာကိုမြင်တော့ စိုးသီဟ အတော်လေး သဘောကျနေပုံပါပဲ။
ဒီကြားထဲ ကျမရဲ့ အင်္ကျီရင်ဘတ်ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ထားတော့
ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျမ ရဲ့ ရင်အစုံကိုလည်း သူကတစ်ခါတစ်ခါလှမ်းဆွဲပြီး ညှစ်ပေးနေပြန်ပါသေးတယ်။
ကျမ မနေနိုင်အောင် ရွထနေရပါပြီ။
စောက် ဖုတ်ထဲမှာလည်း စောက်ရည်ကြည်တွေက ဒလဟောကို စိမ့်ထွက်နေတာကြောင့်
သူ့လီးကြီးနဲ့ ထိုးတိုက်ဖိပွတ်နေတဲ့အခါ တ ပြစ်ပြစ်နဲ့ အသံတွေကို ထွက်ပေါ်နေရပြန်ပါတယ်။
“ ဟင့်…မောင်….မောင်ရယ်….လိုးပါတော့ကွာ….မမ တအားရွနေပြီ…သိရဲ့လား….”
ကျမ မရှက်မကြောက်နဲ့ စိုးသီဟကို လိုးပေးဖို့ တောင်းပန်မိပါတော့တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်လူမြင်ကွင်းတွေမှာ စိုးသီဟ က ကျမကို ရိုးရိုးတန်းတန်း အစ်မလို့သာ ခေါ်ပေမယ့်
နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံလိုးကြတဲ့ အချိန်မှာဆို စိုးသီဟက ကျမကို ‘ မမချော ’ လို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး
အလိုးခံမိတဲ့အချိန်မှာတော့ ‘ မောင် ’ လို့ ခေါ်မိပါတယ်။
စိုးသီဟနဲ့တွေ့မှ ကျမလည်း အရှက်ကုန် ရတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲရှင်။
တစ်ခါမှပြော မထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အပြောအဆိုအသုံးအနှုန်းတွေကို ပြောမိလာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ကျမ လီးစုပ်တတ်လာတာပဲရှင်။
ကျမရဲ့လင်သားကိုတောင် တစ်ခါမှလီးမစုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကျမ စိုးသီဟနဲ့တွေ့မှ
ကျမလီးစုပ်ချင်လာအောင် လီးစုပ်တတ်သွား အောင် သူက ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းခိုင်းစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူကလည်း မိန်းမတွေရဲ့အထာကို ကောင်းကောင်းနပ်သူမို့ သူ့ရဲ့ စေခိုင်းမှုတွေအောက်မှာ ကျမ ငြင်းမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲရှင်။
အဲဒီတုန်းက စိုးသီဟက ကျမကို လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနဲ့ တက်လိုး နေတဲ့အချိန်ပါ။
သူ့ဖင်ကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ချလိုးလိုက်တိုင်း ကျမဟာ နင့်ကနဲနင့်ကနဲနေအောင် ခံရတာကောင်းလွန်းလို့
တ ဟင်းဟင်းနဲ့ငြီးပြီး ကျမရဲ့ရင်အစုံကို ကော့ကော့တင်ပြီး အလိုးခံနေမိပါတယ်။
“ မမချော….ကောင်းလား….” စိုးသီဟက အလိုးအဆောင့်မပျက် ကျမကိုမေးပါတယ်။
ကျမခေါင်းကိုညိတ်ပြပြီး ဖင်ဆုံကြီးကိုလည်း ကော့ကော့ ပေးနေမိပါတယ်။
ရင်အစုံကလည်း ကော့တင်ပေးနေမိတော့ ကျမရဲ့နို့အုံကြီးတွေဟာ မို့မောက်တက်နေတာပေါ့ရှင်။
စိုးသီဟ က ကျမနို့ကြီးတွေကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ကိုင်ပြီး ခပ်တင်းတင်းညှစ်ဆွဲရင်း ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပေးနေပါတယ်။
ကျမ တော်တော် ကို ဖီးလ်တက်နေမိတာပါ။
နှုတ်ကနေတရှီးရှီးနဲ့ အသံထွက်အောင်ငြီးမိပြီး အလိုးခံရတဲ့ ကာမအရသာကို ခံစားနေမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ စိုးသီဟက ကျမပါးစပ်ပေါက်ထဲကို သူ့ရဲ့လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ထိုးသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“ ပြွတ်….ပြွတ်…အွန်း….ဟင်း….ဟင်း….ပြွတ်….” ကျမပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို ကျမ အငမ်းမရနဲ့ စုပ်ယူနေမိပါတယ်။
မိန်းမတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လီး သွင်းအလိုးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ
အခုလို ပါးစပ်ထဲလက်ညိုးတို့ လက်ခလယ်တို့ လာထည့်ရင် အငမ်းမရနဲ့ကို စုပ်ယူတတ်ကြတာ ချည်းပါပဲ။
မယုံရင် ရှင်တို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို လိုးနေရင်း အဲဒီမိန်းမဖီးလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ကြည့်။
သေချာပေါက် ကို အငမ်းမရနဲ့ကို စုပ်ယူလိမ့်မယ်။
ကျမ အဲလိုအငမ်းမရဖြစ်နေပုံကို စိုးသီဟက အပေါ်စီးမှ လိုးဆောင့်ရင်းနဲ့ စီးမိုးကြည့်ပြီး သဘောအကျကြီး ကျလို့နေပါတယ်။
အရမ်းကို ဖီလင်တက်ပြီး အလိုးခံလို့ ကောင်းနေတာကိုး ရှင့်။
“ မမချော…ကျနော် လိုးပေးတာ ခံလို့ ကောင်းရဲ့လား….” “ ပြွတ်…အွန်း….ပြွတ်…အင်း….ဟင်း….ပြွတ်….”
ကျမ သူ့ရဲ့လက်နှစ်ချောင်းပူးကို စုပ်ရင်း မပီမသအသံနဲ့ ပြန်ဖြေမိပါတယ်။
“ ကျနော့် လက်ချောင်းတွေကို အလိုးခံနေရင်း စုပ်နေရတာ ကြိုက်လား….”
ကျမ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြန်ဖြေမိပြန်ပါတယ်။
“ မမချော….လီးစုပ်ဖူးလား…” “ ဟွန့်အွန်း….” ပါးစပ်ထဲက လက်တွေကို အစုပ်ရပ်ပြီး ကျမ ပြန်ဖြေရပါတယ်။
ကျမမှာ တကယ်လည်း လီးမစုပ်ခဲ့ဖူးတာကိုးလီးစုပ် တယ်ဆိုတာကို စကားအဖြစ်သာ ကြားဖူးနေခဲ့ပြီး တစ်ခါဘူးကမှ မစုပ်ဖူးဘူးလေ။
“ အခု ကျနော်လိုးပေးနေရင်း ပါးစပ်ထဲက လက်နှစ်ချောင်းကို လီးလို့သဘောထားပြီး စုပ်ကြည့်စမ်း….
မမချော ပိုပြီး အရသာတွေ့လာလိမ့်မယ်….လီးကြီးကို စုပ်နေတယ်လို့ တွေးပြီး စုပ်ကြည့်စမ်း….”
စိုးသီဟက ကျမရဲ့စိတ်တွေကို အစွမ်းကုန်ထန်ပြင်းလာအောင် စကားလုံးတွေနဲ့ နှူးဆွပြီး
ကျမပါးစပ်ထဲက လက်နှစ် ချောင်းပူးကိုလည်း ကျမပါးစပ်ထဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လိုးသလို လှုပ်ရှားပေးနေပါတယ်။
စောက်ဖုတ်ထဲ ကိုလည်း ခုနက လိုးနေဆောင့်နေတဲ့အရှိန်ထက်ပြင်းတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပါတော့တယ်။
ကျမမှာ စောက်ဖုတ်ထဲ နင့်နင့်နဲနဲဝင်လာတဲ့ လီးကြောင့် ပူထူကျင်ဆိမ့်ပြီး အရသာကောင်းလွန်းလို့
စိုးသီဟပြောတဲ့အတိုင်း သူ့လက် နှစ်ချောင်းကို လီးအမှတ်နဲ့ အငမ်းမရတပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စုပ်ပေးနေမိပါတော့တယ်။
စိုးသီဟကလည်း ကျမအရမ်းဟော့ နေပြီမှန်းသိတော့ ပြင်းထန်အားပါတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ ပက်ပက်စက်စက်မညှာတမ်းကို ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်ရှင်။
စိုးသီဟ ဆောင့်ချက်တွေက အားပါပြီး ပြင်းထန်လွန်းလှတာကြောင့် သူ့လီးရှည်ရှည်ကြီးထိပ်က ဒစ်ထိပ်ကြီးနဲ့ ကျမသားအိမ် ကို တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ လာထိုးတိုက်နေပါတယ်။
ကျမလေ မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး စိုးသီဟ လက်ကို လီးတစ်ချောင်းအဖြစ်မြင်ယောင် ခံစားပြီး အငမ်းမရစုပ်နေရင်း
စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကိုလည်း အတွင်းသားတွေနဲ့ အတင်းဆွဲညှစ်ပေးနေမိပါတယ်။
အ….မမချောရာ….ကျနော့် လီးကို ဆွဲညှစ်ပေးထား….လုပ်…လုပ်….ဖင်ကြီးကိုလည်း ကော့ ကော့ပေး….
ဟုတ်ပြီ….အ….အီး…..အ…. စိုးသီဟ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတဲ့အသံ၊
ကျမ အငမ်းမရနဲ့ ဏှာထန်ပြီး လက်ကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်ယူနေမိတဲ့အသံ၊
စိုးသီဟတစ်ယောက် ဖီလင်တွေတက်ပြီး ညည်းညူအော်ဟစ်နေတဲ့အသံတွေက
တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်နဲ့ အခန်းထဲမှာ ထွက် ပေါ်နေပါတယ်။
ခဏကြာတော့ စိုးသီဟရဲ့ခါးက ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ကျမစောက်ခေါင်းထဲ ပူခနဲ ဖြစ်သွားကာ
သူ၏ လရည် တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျမ စောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် ပူနွေးသွားတဲ့အတွေ့၊
သူ့ရဲ့ အဆုံးသတ်ဆောင့် ချက်ပြင်းပြင်းကြောင့် ကျမလည်း တစ်ချီပြီးသွားရပြန်ပါတယ်။
စိုးသီဟက တစ်ချီပြီးသွားတော့ ကျမဘေးမှာ အမောဖြေဝင်လှဲ ရင်း ခဏနားနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့နို့အုံထွားထွားကြီးတစ်ဖက်ပေါ်ကိုတင်ပြီး
ကျမနို့သီးခေါင်းထွား ထွားကြီးတွေကို ကိုင်ကစားလို့နေပါသေးတယ်။
ကျမ စိုးသီဟရဲ့ ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဖက်ထားလိုက်မိပါတယ်။
ကျမ သူ့ကို အရမ်းစွဲလန်းပြီး ချစ်မိနေတာကိုးရှင့်။
“ မမချော….ပြီးသွားရဲ့လား….” “ အို…ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ….မသိဘူး…သွား….”
ကျမရှက်သွားရပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲခေါင်းကို တိုးဝင်နေမိပါတယ်။
သူက ကျမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးကို ကိုင်ခိုင်းပြန်ပါတော့တယ်။
ကျမကလည်း မကိုင်ချင်ကိုင်ချင်ပုံစံနဲ့ပဲ စိတ်ပါလက်ပါ ကိုင်ပေးနေမိပြန်ပါတယ်။
“ မမချော….ကျနော် လိုးပေးတာ ကောင်းရဲ့လား….” “ အို…မောင်ကလည်း….”
“ ဖြေနော်….မဖြေရင် နောက်တစ်ခါ တက်လိုးပစ်လိုက်မှာ….”
“ အင်း….အင်း….ကောင်းတယ်….ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….လူကို သိပ်အနိုင်ကျင့်တာပဲ….အရမ်းဆိုးတယ်….”
ကျမ ရှက်ရွံ့သလိုလေးဖြေရင်း သူ့ကို ချစ်စနိုးနဲ့ အပြစ်တင်စကားဆိုမိပါတယ်။
သူနောက်တစ်ခါ ထပ်လိုးမှာကို အပြစ်မြင်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။
မမချော….ကျနော့်ကို လီးစုပ်ပေးပါလား….” “ အာ….မစုပ်ချင်ပါဘူး….တစ်ခါမှလည်း မစုပ်ဖူးဘူး….”
“ လုပ်ပါ မမချောရာ….စုပ်ပေးပါ….ကျနော် မချော နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ စုပ်ပေးတာကို ခံချင်လို့ပါ….”
စိုးသီဟက ကလေးတစ်ယောက်လို ကျမကို ပူဆာလို့နေပါတယ်။
ကျမနို့ကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်၊ ကျမ တင်သား ကြီးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်နဲ့ အတင်းကို လီးစုပ်ခိုင်းနေပါတော့တယ်။
ကျမကိုယ်တိုင်လည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ လီးစုပ်ဖို့ကို စိတ်ပါလာသလိုဖြစ်လာရပါတယ်။
ခုနအလိုးခံနေရင်း သူ့လက်နှစ်ချောင်းကို လီးအမှတ်နဲ့ အားပါးတရစုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီလင်ကို ပြန်အမှတ်ရပြီး
နောက်ဆုံးတော့ သူ့သဘောဆန္ဒအတိုင်း လီးစုပ်ပေးဖို့ လိုက်လျောမိပါတော့တယ်ရှင်။
“ မင်း….တော်တော်ဆိုးတယ်သိလား….မမ အဲလို တစ်ခါမှလုပ်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး….”
“ အင်းပါ…မမချောရာ…ကျနော့်ကိုချစ်ရင် စုပ်ပေးပါတော့နော်….”
နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျမ သူ့လီးကို ပါးစပ်ထဲငုံပြီး မစုပ်တတ်စုပ်တတ်နဲ့ စုပ်ပေးမိတော့တာပါပဲ။
အဲဒီနောက်မှာ တော့ စိုးသီဟက လီးစုပ်ခံရင်း ကျမကို လီးစုပ်နည်းတွေသင်ပေးရင်း သူ့စိတ်ကြိုက်ကို စုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။
အဲဒီကစလို့ စိုးသီဟက ကျမကို လာလိုးတိုင်း သူ့လီးကို ကျမကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ဆွဲစုပ်မိတော့တာပါပဲရှင်။
အခုလည်း သူ့ကို ကျမလီးစုပ်ပေးပြီးလို့ အလိုးခံဖို့ ပက်လက်လှန်ပေါင်ဖြဲပြီး
ဒကောက်ခွက်ကို ဆွဲမကာ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အစွမ်းကုန်ကော့ တင်ဖြဲကားပေးထားတာပါ။
ဒါကို သူက မလိုးပေးသေးဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ်ပြဲပြဲကြီးကို သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့ ထိုးတိုက်ပွတ်ဆွပြီး
ကျမရဲ့ ရမက်ဆန္ဒတွေကို ထကြွသထက်ထကြွအောင် ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။
“ မောင်….လိုးထည့်လိုက်ပါတော့ မောင်ရယ်….မမ စောက်ဖုတ်ထဲ မင်း လီးကြီးကို လိုးထည့်လိုက်ပါတော့….
အဟင့် …ဟင့်….မမ မနေတတ်တော့ဘူး….ဟင်း….လိုးပါတော့နော်….” ကျမ ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။
လီးစုပ်ပေးနေတုန်းကတည်းက စိတ်တွေထကြွနေခဲ့ခြင်းကြောင့် အလိုးခံ မည့်အချိန်ရောက်ပြန်တော့
မလိုးပေးသေးဘဲ ရွထနေအောင် ဆွပေးနေလေတော့
ကျမနှုတ်က မရှက်မကြောက်နဲ့ပဲ လိုးပေး ဖို့ တစ်တစ်ခွခွဖွင့်ဟပြောပြီး တောင်းဆိုလိုက်မိပါတော့တယ်။
ကျမရဲ့ အငမ်းမရ ဏှာထန်နေတဲ့ပုံနဲ့ တစ်တစ်ခွခွစကားသံကို ကြားရမြင်ရတော့မှ
စိုးသီဟက သူ့လီးကြီးကို ကျမစောက်ခေါင်းပေါက်ဝသို့တေ့ပြီး တရှိန်ထိုးဆောင့်လိုးသွင်းပစ်လိုက်ပါ တော့တယ်ရှင်….